Ngaba iMpawu zeNtlalo ziphucula i-SEO?
Abadali bokuqukethwe kunye nabathengisi be-intanethi bahlala bekhangele iindlela ezintsha zokuqhuba i-SEO rank kumaphepha okuqala eenjini zokukhangela.Into ebangel 'umdla kukuba nangona bafikelela kwi-10 ephezulu yeGoogle, basadingeka ukuba bavelise umxholo omtsha kunye nobalulekileyo rhoqo ukugcina isikhundla sabo.
Nangona kunjalo, kubalulekile kubanini bewebhusayithi ukuqonda ukuba ukuvelisa umxholo omkhulu akwanele. Umxholo omhle ufuna ukukhuthazwa okusebenzayo. Kubalulekile ukukhuthaza umxholo wakho kwabanye abantu ukwenzela ukuba ukwandisa ukufikelela kwezentlalo.
Masibhekane nayo: xa sibhala kwaye sishicilela amanqaku ethu, iiblogi zithuba, ii-eBooks, amaphepha amaphepha aluncedo okanye i-infographics, indlela efanelekileyo yokuyifumana phambi kwabaphulaphuli bethu ngorhulumente weendaba - arçelik yetkili servis.
Njengoko ilizwi lihamba, ukwabelana kunakekela. Kunzima ukukhanyela ukuba iimpawu zentlalo, kunye neendaba zoluntu, zichaphazela kakhulu i-SEO. Iingcali ze-Semalt zivumelana ngokupheleleyo nenkohlakalo eyenziwe ngu-Guru uBaer Baer, ​​owake wachaza ukuba loo mxholo ungumlilo, kunye neendaba zentlalo i-petroli.
Ndingayinceda njani imiqondiso yeNtlalo Ukwandisa i-SEO YESI?
1. Ukucwangcisa Inkqubo yokwabelana ngokubambisana
Into yokuqala omele ukwenze ukuqhuba ukuhamba kweetrafikethi kwisayithi yakho kukukwenza kube lula ukuba abasebenzisi babelane ngomxholo wakho ngeendaba zoluntu. Ukuba kunokwenzeka, musa ukushiya iindwendwe ukukopisha nokunamathisela i-URL kwizithuba zabo ze-Facebook. Uninzi lwabafundi abanalo ixesha okanye umonde wokukwenza oko. Ngenxa yoko, uya kulahla ithuba lokukhuthaza umxholo wakho ngenxa yamava omsebenzisi angalunganga.
Hlala ukhumbule, xa unenkathalo malunga neendwendwe zakho kwaye wenze kube lula ngabo ukuba babelane ngomxholo wakho, banako ukukwazi ukwabelana ngezithuba zakho kunye noluntu lwentlalo, ukudala i-traffic transfert kwisayithi lakho.
2. Gxotha i-Backlinks yakho
I-backlink ingenelo olungenayo ukusuka kwezinye izixhobo ukuya kwiphepha lakho lewebhu. Phantse zonke iinjongo zokukhangela, kuquka neGoogle, Yahoo, kunye neBing ziqwalasele zombini ubukhulu kunye nomgangatho wale backlink xa ubeka iphepha. Ukubeka nje, iphepha elibandakanya amaninzi amanqamlezo aphezulu ahlala ephakamileyo. Ingakumbi, ukuba abafundi baqakraza kwi-site yakho kwiiwebhusayithi ezithembekileyo, ii-injini zosesho ziza kulandelelanisa isiqhagamshelo, zibonise umxholo, kwaye zibeke umxholo wakho ngokufanelekileyo.
3. Ukwandisa iSayithi lakho ngeSahlulo seSelula
Ngo-2017, ukuxutywa kweevenkile, ezentlalo, kunye nokuthengisa kwendawo kuchaphazela i-SEO kunanini ngaphambili. Le mihla, uninzi lwabantu lusesha kwiifowuni kunama-laptops. Bakhetha ukuphanda nokuthenga ekuhambeni. Iinjongo zophando ziyaziqonda izixhobo eziphathekayo eziphathekayo kunye nobukhulu obuphezulu. Qinisekisa ukuba ifayili yeselula yewebhusayithi yakho inikeza iindwendwe indlela elula yokuxelela umxholo wakho.
Abo babanikazi beendawo abanendawo eneendawo ezininzi kunye namaphepha okungena kwendawo yomxholo wabo, kufuneka bacinge ngendlela yokulungiselela ukwenziwa kweefowuni kunye neemeko zentlalo kwiwebhusayithi yabo.Kubalulekile kuba le ingentla yimiba ephambili echaphazela ukukhangela kwendawo yokucinga.
Okokugqibela kodwa akuyona into encinci ekufuneka uyiqwalasele yinto yobungqina bentlalo obongeza igunya kumanqaku akho, izithuba zeblogi kunye neevidiyo ze-YouTube ngokubonisa ukuba zibalulekile kwaye zithembeke. Ubungqina bentlalo ubonisa ubungqina bakho, ukuphawula, kunye neengcaphuno zengcali. Ubungqina bentlalo busebenza ngale ndlela elandelayo: ukuba umntu ubona ukuba abantu abaninzi babelana nomxholo wakho, baya kulahlwa ukuba bajonge kwaye babelane ngayo ngokunjalo.